Kama Fududeyneyso Suuqgeeyayaasha | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 5, 2009 Khamiista, Febraayo 9, 2017 Douglas Karr
Fure u ah xiriiriyeyaal badan oo aan la wadaago iyo qoraalada aan ku qoro balooggan ayaa ah qalabaynta. Sababta ayaa ah mid fudud… hal mar, suuqleydu waxay si fudud macaamiisha ugu rogi karaan astaan, astaan, jiingado iyo qaar ka mid ah baakadaha wanaagsan (Waxaan qirayaa in Apple wali ku fiican tahay tan).
Dhexdhexaadintu waxay ahaayeen uni-jaheyn. Si kale haddii loo dhigo, Suuqleyda ayaa sheegi kara sheekada macaamiisha ama macaamiisha B2B waa inay aqbalaan… iyadoon loo eegin sida ay sax u ahayd. Suuqleyda waxay lahaayeen 3 kanaal oo telefishanka qaranka ah, raadiyaha maxalliga ah, wargeyska, boorarka, shirarka, bogagga (asalka ah) Bogagga Jaalaha ah, war-saxaafadeedyada iyo boostada tooska ah. Noloshu waxay ahayd mid fudud.
Hadda waxaan haynaa boqollaal kanaal oo telefishan maxalli ah iyo heer qaran ah, raadiye maxalli ah iyo dayax gacmeedyo, joornaallo, waraaq toos ah, emayl, bogag internet-ka ah oo qoraal ah, baloogyo, shabakado bulsheed aan xadidnayn, makiinado badan oo raadin ah, bogag internet-ka lagu qoro oo aan tiro lahayn, micro-blogs, Akhristayaasha RSS, tusaha websaydhka, boorarka, war-saxaafadeedyada, waraaqaha cadcad, kiisaska isticmaalka, markhaatiyada macaamiisha, buugaagta, shirarka, xayeysiinta masraxa filimka, telemarketing, shirarka yar-yar, farabadan Bogagga Jaallaha ah ee kala duwan, boostada tooska ah, wargeysyada bilaashka ah, suuqgeynta bilaashka ah, lacag bixinta -per-riix xayeysiinta, xayeysiinta banner, xayeysiinta raacsan, aalado, xayeysiinta ciyaarta fiidiyowga, suuq geynta fiidiyowga, suuqgeynta fiidiyowga, suuq geynta fayraska, bartilmaameedka akhlaaqda, bartilmaameedka juqraafi, suuq geynta xogta, barnaamijyada gudbinta, maareynta sumcadda, waxyaabaha isticmaale soo saaray, qiimeynta, dib u eegista waa socotaa oo waa socotaa… wuuna korayaa maalin kasta.
Nasiib darrose, waaxyaha Suuqgeynta kuma aysan korin cufnaanta ballaaran ee dhexdhexaadiyeyaasha, dhab ahaantii wey yaraadeen. Sidoo kale, manhajka celceliska ardayga Suuqgeyntu waa sanado ka dambeeya meeshii aan ugu baahanahay inay ahaadaan. Kama caawin karo laakiin waan la yaabi karaa sida indhaha ballaaran ee celceliska suuq-geynta suuq-geynta ay tahay inuu ahaado markay ugu dambeyntii albaabka ka galaan!
Suuqleydu Waxay U Baahan Yihiin Caawin
Isla mar ahaantaana, internetka - aka Macluumaadka Superhighway -, wuxuu leeyahay fikrado iyo ilo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay qof kasta oo daneynaya inuu sifeeyo. Dhibaatadu waxay tahay in fikradaha aan dhammaad lahayn - in badan oo ka mid ahna si fudud uma shaqeeyaan.
Uma sahlaneyso Suuqleyda, sidaa darteed waxay si joogto ah u gaarayaan caawimaad. Laakiin caawimaaddu had iyo jeer kuma hoggaaminayso jihada saxda ah.
We Dugsi duq ah suuqleyda waxay barteen sida loo tijaabiyo, loo cabbiro, loo tijaabiyo loona cabbiro mar kale si loo kala hormariyo ololaheena iyo in laga faa'iideysto awooda warbaahin kasta iyadoo la hubinayo in soo noqoshada maalgashiga si joogto ah loo taageeray. Waxaan baranay sida otomaatiga loogu sameeyo tirada si loo kordhiyo furayaasha waxaan la yeelanay macaamiisha iyo rajooyinka iyadoo la yareynayo ilaha guud ee loo baahan yahay. Waxaan baranay sida loo kala saaro calaamadaha iyo buuqa, loona akhriyo codsiyada wax ku oolka ah, oo aan si dhakhso leh oo naxariis leh wax u baranno.
Waxaa jira isku dhac hadda ka dhex jira la-taliyeyaasha suuq-geynta dhallinyarada ee ku-meel-gaadhka ah ee internetka iyo xirfadlayaal hore oo xirfadlayaal ganacsi ah, in kastoo. Waxaan u aqrinay buunbuunintii mid dhexdhexaad ah kadib markii dhexdhexaad ay suuqa gashay 20kii sano ee lasoo dhaafay. Raadi naftaada xirfadle soo maray tan oo yaqaana sida loo cimilo karo.
Ganacsigaagu wuxuu ku xiran yahay kuwa aad ku kalsoon tahay! Hubi in kuwa aad ku kalsoon tahay ay leeyihiin waayo-aragnimo lagama maarmaan u ah inay ku dhex maraan himilada oo aad u hesho waxa ku dhiirrigelinaya ganacsigaaga.
Tags: farabadan oo bogag huruud ahxayeysiiska xiriirka la lehxayeysiinta bannerbeegsiga habdhaqankabootooyinkaBlogsbogag internet-ka ahbogag bulsheed oo aad u tiro badanmarkhaatiyada macaamiishasuuq geynta macluumaadkaboostada tooska ahemailwargeysyada bilaashka ahbartilmaameed juqraafiyeedraadiyaha maxaliga ah iyo kan satalaytkaBuugaagta SuuqgeyntaShirarka Suuqgeyntablog-yaryarshirar-yaryarmarketing mobilexayaysiinta tiyaatarka filimadamatoorada raadinta badantelefishanka qarankawargeysyadalacag ku bixi halkii xayaysiissaxaafadeedqiimeyntabarnaamijyada gudbintamaaraynta sumcadReviewsRSS quudintelemarketingshabakadaha bulshada aan xadidneynisticmaal kiisaskawaxyaabaha ka kooban isticmaalexayaysiinta ciyaarta fiidiyowgasuuqgeynta fiidiyowgasuuq-geynta faayraskaTilmaamaha shabakaddawhitepaperswidgets
Febraayo 6, 2009 saacadu markay tahay 11: 14 AM
Runta ayaad sheegaysaa. Markii aan jilibka si qoto dheer ugu jiray shahaadada mastarka, waxaan si dhakhso leh u bartay in waaxdu ay ku raagtay aqoontooda ku saabsan qalabka warbaahinta aan u leenahay si aan ugu gudbino fariinteenna. Anigoo ah xirfadle xiriirka bulshada, waxaa igu adkaatay inaan la socdo teknolojiyadda.
Laakiin haddii ay jirto hal shay oo aan bartay. Waa wax qiimo leh in la barto isbeddellada. Eeg waxa dadku u isticmaalayaan inay ku wada xiriiraan iyo waxa aysan u isticmaalin. Dabcan, taasi way sii adkaaneysaa markii aan bilaabayno kala-qaybinta dhagaystayaasha.
Ugu danbeyntii, waxaan u maleynayaa in waxa dadku u adeegsadaan isgaarsiinta ay ka muhiimsan yihiin fariinta la is gaarsiinayo. Haddii fariinta ay fududahay, layaab tahay, lagu kalsoonaan karo, la taaban karo, taabato shucuurta oo sheeko sheegeyso, markaa taasi waxay abuureysaa soo laabasho wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga, oo ay tahay in lagu cabbiro dollar iyo senti, laakiin sidoo kale sida xiriirka loo dhisayo loona ilaalinayo.